Galaxy Z Flip အတွက် သီးခြားသတ်မှတ်ထားသည့် မည်သည့် သုုံးစွဲသူစောင့်ရှောက်ဝန်ဆောင်မှု ရှိပါသလဲ။? | Samsung Myanmar
Galaxy Z Flip အတွက် သီးခြားသတ်မှတ်ထားသည့် မည်သည့် သုုံးစွဲသူစောင့်ရှောက်ဝန်ဆောင်မှု ရှိပါသလဲ။?
Galaxy Z Flip က ကျွန်ုုပ်တိုု့ တန်ဖိုုးအထားရဆုုံး သုုံးစွဲသူများအား ဖြစ်နိုုင်သလောက် အကောင်းဆုုံး ထုုတ်ကုုန်ကိုုပေးအပ်ရန် ဒီဇိုုင်းထုုတ်ထားသည့် Galaxy Z ပရီမီယာ ဝန်ဆောင်မှု (Premier Service) ဟုု အမည်ရသည့် သုုံးစွဲသူ အထူးစောင့်ရှောက်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် တွဲလာပါသည်။
Galaxy Z Flip စခရင် အကာအကွယ် ကပ်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှု
Galaxy Z Flip က နိုုင်ငံတိုုင်းမှ ဥပဒေ နှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုုင်း လိုုက်နာသည့် အခြေခံ ထုုတ်ကုုန်ဝရန်တီ တစ်ခုုဖြင့် တွဲလာပါသည်။
သုုံးစွဲသူများအနေဖြင့် *အခွင့်အာဏာရ Samsung ဆားဗစ်စင်တာတစ်ခုုတွင် စခရင် အကာအကွယ် ကပ်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုကိုု အခမဲ့ (FOC) တစ်ကြိမ်တစ်ခါ ရရှိပါလိမ့်မည်။ သိုု့ပါသော်လည်း ယင်းဝန်ဆောင်မှုက ဝယ်ယူသည့်နေ့မှ ၁ နှစ် အထိ တရားဝင်ပါသည်။
ပြသသည့် မျက်နှာပြင် ပျက်စီးသွားပါက ဖုုန်းကိုု Samsung မှ အခွင့်အာဏာပေးထားသည့် နေရာများတွင်း ပြင်ဆင်နိုုင်ပါသည်။ ပျက်စီးပုုံ အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး အစားထိုုးအစိတ်အပိုုင်းများအတွက် အခေကြေးငွေ ကောက်ခံနိုုင်ပါသည်။
မှတ်သားရန် - *စခရင် အကာအကွယ် ကပ်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုနေရာများက နိုုင်ငံ နှင့် လက်ခွဲများပေါ်မူတည်ကွဲပြားနိုုင်ပါသည်။
Galaxy Z Flip ဝန်ဆောင်မှုများ Click to Expand
၁ နှစ်အတွင်း Galaxy Z Flip ပင်မစခရင် အစားထိုုးလဲလှယ်ခြင်း သိုု့မဟုုတ် ပြင်ဆင်ခြင်း
သင် ဖုုန်းဝယ်ယူသည့်နေ့မှ ၁ နှစ်အတွင်း စခရင် အစားထိုုးလဲလှယ်ခြင်း သိုု့မဟုုတ် ပြင်ဆင်ခြင်း တစ်ကြိမ်တစ်ခါ ရပိုုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
စခရင် တစ်ကြိမ်တစ်ခါ စျေးသက်သက်သာသာဖြင့် အစားထိုုးလဲလှယ်ခြင်း သိုု့မဟုုတ် ပြင်ဆင်ခြင်းက အတွင်းပိုုင်းရှိ ချိုးခေါက်နိုုင်သော Galaxy Z Flip ပင်မ စခရင်အတွက် အကျုံးဝင် သက်ရောက်ပါသည်။ သုုံးစွဲသူအနေဖြင့် စခရင်ကိုု လျှော့စျေးဖြင့် အစားထိုုးလဲလှယ်ရန် သိုု့မဟုုတ် ပြင်ဆင်ရန် ငွေးပေးချေရနိုုင်ပါသည်။
အကာအကွယ် အာမခံက နိုုင်ငံအလိုုက် ကွဲပြားနိုုင်ပါသည်။ အကျုံးဝင်သော အခြား စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အခေါ်အဝေါ်များ။
Galaxy Z Flip မျက်ချေမပြတ်စောင့်ရှောက် ဝန်ဆောင်မှု
Galaxy Z Flip ကိုု.ဝယ်ယူသော သုုံးစွဲသူတိုုင်း Galaxy Z ပရီမီယာ ဝန်ဆောင်မှု ကိုု ရရှိပါလိမ့်မည်။
အဆိုုပါ အထူးသီးသန့် သုုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုက Samsung အထူးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ နှင့် *အွန်လိုုင်း သိုု့မဟုုတ် ဖုုန်းပေါ်မှ ၂၄/၇ အထောက်အပံ့ဌာန ပါဝင်ပါသည်။
မှတ်သားရန် - *ကမ်းလှမ်းသော ဝန်ဆောင်မှုများက နိုုင်ငံ နှင့် လက်ခွဲများပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုုင်ပါသည်။
ထပ်ဆောင်း အချက်အလက်အသေးစိတ်များရရှိရန် ကျေးဇူးပြုပြီး Galaxy Z Flip ဝန်ဆောင်မှုများသိုု့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။